Janaayo | 2008 | WEEJIDOW
Archive for Janaayo, 2008
War Deg Deg ah: Bootaan Ciise Caalin “Xaaraan Ku Naax” oo lagu weeraray guriisa
Janaayo 31, 2008
Bootaan Ciise Caalin oo loo yaqaano “Xaaraan ku Naax” oo ka tirsanaan jiray isbaheysigii la dagaalanka argagixisada ayaa caawa bom lagu weerar gurigiisa oo ku yaala xaafada Buula Xuubeey. Wararku waxay intaa ku darayaan in isbitaalka loola cararay halkaas oo ay dhaqaatiir ku qalayaan.
Waa markii ugu horeysay oo qof ka mid kooxda Isbaheysiga la dagaalka argagixisada leysku dayo in la qaarajiyo.
War Deg Deg ah: Afhayeenkii Labaad ee Maamulka Gobolka Banaadir Cabaas Maxamed nuur Galeyr oo caawa lagu dilay Muqdisho
Wararka naga soo garay magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in laba nin oo ku hubaysan bistoolado ay dileen ku simihii Afhayeenkii labaad ee Maamulka Gobolka Banaadir Cabaas Maxamed nuur Galeyr
Cabaas Maxamed Nuur Galeyr ayaa xiliga la dilayey ku sugnaa meel makhaayad ah oo uu ka cuntaynayey waxaana baxsaday labada nin ee dilka geystay.
Geerida Cabaas Maxamed nuur Galeyr ayaa waxaa xaqiijiyey Gudoomiyaha degmada Xamar-weyne Gardhuub
Shirk Madaxeedka Midowga Africa
Waxaa maanta magaalada Addis Ababa ee xaruunta waddanka Ethiopia ka furmay kal fadhiga tobnaad ee kulanka caadiga ah ee madaxda iyo dowladaha midowga Africa.
Horumarinta warshadeed ee qaaradda Africa, waxaana arrimaha uu wax ka qabanayo ka mid ah doorashada guddoomiyaha midowga Africa, xubnaha guddiga midowga Africa iyo guddiyada kale ee ururka.
Waxaa shirkan lagu dooranayaa xubnaha cusub ee Golaha amniga iyo nabadda ee midowga Africa.
Mowduucyada kale ee lagu soo qaadayo waxaa ka mid ah ansixinta miisaaniyadda ururka ee sanadka 2008-da, waxaa madaxdu ay eegayaan oo kale warbixinada golaha fulinta ee guddiga xisaabaadka iyo warbixinta guddiga wasiirada ee dowladda midowga.
Guddiga wasiirada Midowga Africa, waxay shirkoodii caadiga ahaa ee 12-aad ay xarunta midowga Africa ee Addis Ababa ku yeesheen 27-kii ilaa sagaal iyo labaatanka bishan January, waxyaabaha ay soo qaadeen waxaa ka mid ah ansixinta warbixinada shirarkii hore diyaarinta miisaaniyadda 2008-da, eegidda warbixinta guddiga wakiilada joogtada ah, oo iyaguna shirayay 25-kii ilaa 26-ka January.
Shirka Madaxda Africa, waxaa kaloo lagu soo qaadayaa howlaha Golaha nabadda iyo amniga ee midowga Africa iyo xaaladda guud ee amniga iyo nabadda qaaradda Africa, oo ay ku jiraan xaaladaha Soomaaliya, xiisadda ka taagan Kenya ee ka dhalatay doorashooyinkii 27kii December ka dhacay dalkaasi iyo qodobo kale.
Marka shirku ka baaraandego arrimo dhowr ah oo ay soo jeediyeen wadamada xubnaha ka ah, wuxuu ansixinayaa gu’aanada ay soo saareen golaha fulinta ee wasiirada ka kooban oo shirkoodii caadiga ahaa ee 12-aad yeelanaya, wuxuu soo saarayaa go’aano u gaar ah kala fadhiga tobanaan ee shirka caadiga ah ee midowga Africa.
Sheekh Aadan Madoobe oo maanta u dabaal degay sanadguurudii 1-aad ee markii loo doortay xilka guddoomiyaha baarlamanka
Munaasabad lagu maamuusayey sanadguuradi koowad ee ka soo wareegtay markii Guddoomiyaha baarlamanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) loo doortay xilkaasi ayaa maanta ka dhacday hoolka ADC-da ee magaalada Baydhabo, iyadoo munaasabaasi dabaaldega ahna ay ka soo qeyb galeen xildhibaano iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada ee xukuumada Soomaaliya.
Sheekh Aadan Madoobe ayaa isagoo munaasabadaasi ka faa’iideysanaya waxaa uu xariga ka jaray xafiisyo ay yeelan doonaan markii ugu horeysay mas’uuluyinta sare ee baarlamanka iyo guddiyada 14-ka ah ee baarlamanka uu leeyahay, kuwaasoo uu sheegay iney hadda iyo wixii ka dambeeya ku howlgeli doonaan mas’uuliyintaasI oo uu xusay iney ka bixi doonaan xafiISyAdii ku meel gaarka ahaa ee ay horey ugu shaqeyn jireen.
“Intii aan hayey xilka guddoomiyenimada baarlamanka waxaa uu ku talaabsaday golaha baarlamanka guulo waaweyn oo la taaban karo, waxaana ka mid ah qabsoomida shirkii dib u heshiisiinta Soomaaliyeed, ansixinta xukuumadii tirado yareyd ee baarlamanka iyo arimo kale oo aad u fara badan, waxaana rajeynaya inta xilkeena ka dhiman aanu waajibkeena u gudan doono sidii loogu talo galay, ummadda Soomaaliyeedna u horseedi doono inaan gaarsiino doorashooyin xor ah iyo nabadgelyo buuxda” ayuu yiri Sheekh Aadan Madoobe.
Kulanka Madaxda Dowladaha Afrikaanka oo maanta si rasmi ah ugu furmaya Magaalada Addis Ababa.
Shir Madaxeedkii Midowga Afrika ayaa lagu wadaa in maanta uu ka furmo Magaalada Adis ababa ee dalka Ethiopia, iyadoo shirkan waxyaabaha ugu weyn ee laga yaabo inuu saameyn ku yeesho ay ka mid yihiin xaaladaha ka jira dalka kenya iyo digniinta uu Madaxda Afrika u jeediyay Madaxweynaha Liibiya Mr Qadaafi.
Arrimaha looga hadli doono shirkan waxaa ka mid ah isbedelada lagu sameynayo ururka Midowga Afrika, Xaaladaha ka jira Soomaaliya,Kenya iyo Gobolka ku yaala Galbeedka dalka Suudaan ee Indha Caalamka ku jeedaan Daafuur.
Waxaa la filayaa in shirkan uu ka qeybgalo Ra’iisul Wasaaraha Dowladda Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Maadama uu Madaxweyne C/llaahi Yuusuf weli liito Caafimaadkiisa.
Kaaliyaha Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka u qaabilsan Afrika ayaa ka mid ah Madaxda lagu casuumay shirkan, waxaana la filayaa in khudbadeeda diirada ku saarto xaaladda murugada leh ee ka jirta Kenya taasi oo ka dhalatay doorashooyinkii uu ku shubtay Madaxweyne Kibaki, sidoo kale waxay wax ka soo qaadi doonta Soomaaliya.
Dhinaca kale Madaxweynaha Liibiya Col Qadaafi ayaa ku hanjabay haddii Midowga Afrika qaadan waayan tallooyinka uu soo jeediyay ee mustaqbalka Afrika uu ka jeesan doono Qaaradda Afrika una jeesan doono Carabta iyo Midowga Yurub.
Ciidamada Brundi oo markii u horeysay lagu arkay Magaalada Muqdisho, iyagoona fariisimo ka sameystay Gudaha Magaalada.
Ciidamada Nabad Ilaalinta Dalka Brundi ayaa saaka markii u horeysay lagu arkay Gudaha Magaalada Muqdisho, iyagoona sameystay fariisimo cusub
Sida ay sheegayan wararka naga soo gaaraya degmada Madiina Ciidamada Brundi oo ka mid ah Ciidamada Nabad ilaalinta Midowga Afrika ee jooga Muqdisho ayaa saaka fariisamo ka sameystay Jaamacaddii Umadda iyo Jaamacadda kale GAHEYR ee Magaalada Muqdisho.
Ciidamadan Brundi waxay ka soo dhaqaaqeen Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho, iyagoo socod Gaadiid iyo mid Ciidamada lugta ah ku maray Xaafadda Madiina, markii ay halkaas marayeen ayay gacamaha kor u taagayeen iyagoo salaamayay dadweynaha wadada dhinaceeda taagnaa.
Socodka Ciidamada wax saameyn ah kuma yeelan dhaqdhaqaaqa Ganacsiga iyo midka dadweynaha sida uu sheegayo goobjooga ku sugan degmada Madiina.
Lama oga inay toos u degeen Ciidamada Brundi Labada Jaamacadood iyo in kale, waxaase la rumeysan yahay in Jaamacadda GAHEYR ay saldhig u ahayd Col Gabre oo ah Madaxda Siyaasadda Ciidamada dalka Itoobiya ee Soomaaliya.
War Deg Deg ah: Iska Hor imaad kooban oo saaka Ciidamo ka tirsan Dowladda iyo kooxaha ka soo horjeeda ku dhex maray Muqdisho.
Iska hor imaad kooban ayaa saaka waxa uu dhacay Xaafada Geed Jaceyl ee Magaalada Muqdisho, kaasoo ku dhex maray Ciidamada Dowladda iyo kooxaha ka soo horjeeda.
Wararka ayaa sheegaya in iska hor imaadkaas uu qasaare dhimasho iyo dhaawacba leh uu ka soo gaaray Ciidamada Dowladda, kadib markii weerar gaadmo ah lagu soo qaaday.
Hal askari ayaa inta la hubo ku dhintay weerarkaas gaadmada ahaa, halka labo kalena uu ku dhaawacmay sida dadka deegaanka inoo sheegeen.
Ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa Dowladda ayaa soo buux dhaafiyay Deegaanka Geed Jaceyl ee Degmada Wardhiigley, waxaana istaagay isu socodka dadka iyo gaadiidka kala suuqa Bakaaraha oo mara Xaafadaha Wardhiigley, bacdamaa Wadada Wadnaha ay ka xiran tahay dhinaca Xararyaale iyo Isgoyska Aadan Cadde oo aheyd halkii horay gaadidka uga geli jireen Suuqa Bakaaraha.
Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta soo bandhigay Waxqabadkiisa tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu Guddoomiye u doortay Shiikh Aadan Madoobe
Baarlmaanka Soomaaliya ayaa maanta wuxuu soo bandhigay waxqabadkiisa muddo sanad ah oo ka soo bilaabaneysay 31-kii Janaayo 2007, xiligaas oo uu Baarlamaanka Guddoomiye u doortay Shiikh Aadan Maxamed Nuur (Shiikh Aadan Madoobe).Xaflad lagu maamuusayay mudada sanadka ah ee ka soo wareegatay markii Shiikh Aadan Madoobe Guddoomiyaha Baarlamaanka loo doortay oo ka dhacday Xarunta Baarlamaanka ee ADC-da ayaa waxaa heeso ka qaadanayay Kooxo Fannaaniin ah, waxaana ka qeybgalay Xildhibaannada Baarlamaanka Soomaaliya.
Xoghayaha Baarlamaanka Xildhibaan Maxamed Fiqi oo aqrinayay warbixin ku saabsaneyd waxqabadka Baarlamaanka ayaa sheegay in shirar iyo seminaarro badan oo Baarlamaanka Soomaaliya lagu casuumay uu uga qeybgeli waayay dhaqaale la’aan la soo deristay, isagoo taasina ku tilmaamay nasiib darro, wuxuuse intaas kadib sheegay in Baarlamaanka uu waxyaabo badan qabtay mudadii sanadka ahayd ee aan ka soo gudubnay.
Waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Shiikh Aadan Madoobe oo sheegay in mudadii sanadka ahayd ee laga soo gudbay uu Baarlamaanka ku tallaabsaday guulo la taaban karo, wuxuuna guulahaas ka soo qaatay in Baarlamaanka uu ogolaaday in la soo dhiso Xukuumad tiro yar oo weliba laga qaadan karo gudaha iyo dibadda baarlamaanka, isagoo xusay in ay taasi ahayd talo soo jeedin ka soo baxday Shirkii Dib u heshiisiinta Soomaaliyeed ee Muqdisho lagu qabtay.
“Maanta waxaa la gaaray in laga gudbay Xukuumaddii ka badneyd 100-ka Wasaaradood, isla markaana la soo dhisay Xukuumad ka kooban 18 Wasiir iyo 5 Wasiir ku xigeen oo uu Baarlamaanka cod aqlabiyad leh ku ansixiyay, taasina waxaan dhihi karaa waa guul uu Baarlamaanka gaaray”ayuu yiri Shiikh Aadan Madoobe.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya oo intaas kadib la hadlayay shacabka Soomaaliyeed waxaa uu ku baaqay in la hirgeliyo nabada iyo dib u heshiisiinta ay ku baaqday Dowladda Federaalka Soomaaliya, isagoo farta ku fiiqay in ay Soomaali is-dileysay ku dhawaad 20 sano, ilaa iyo haatanna aan la heynin guul lagu gaaray.
Ugu dambeyntiina, Guddoomiyaha Baarlamaanka waxaa uu maanta furay Xafiisyo loo sameeyay 14 guddi oo uu Baarlamaanka leeyahay, kuwaasi oo sida muuqata aan xafiisyo lahayn mudado seddex sano iyo dhowr bilood ah oo uu dhisan yahay Baarlamaanka Soomaaliya.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo ugu baaqay dhinacyada ka soo horjeeda Dowladda Federaalka in ay Miiska Wada hadalka yimaadaan, Xabaddana joojiyaan
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, ahna Duqa Magaalada Muqdisho Maxamed Cumar Xabeeb (Maxamed Dheere) ayaa maanta ugu baaqay dhinacyada ka soo horjeeda Dowladda Federaalka in ay miiska Wada hadalka soo fariistaan, isla markaana ay xabadda joojiyaan.“Mucaaradka waa in uu soo fariistaa miiska wada hadalka, xabaddana waa in uu joojiyaa, maxaa yeelay meel xabad ka dhaceyso qof joogi karto ma jirto”ayuu yiri Maxamed Dheere oo sheegay in wada hadal dhexmara Dowladda Federaalka iyo dhinacyada ka soo horjeeda uu dan u yahay maamulka Gobolka Banaadir.
“Maamul ahaan waxaa nalaga dilay 9 Guddoomiye Degmo iyo 19 haween ah oo howlo nadaafeed ka waday Degmooyin ka tirsan Gobolka Banaadir, kuwaasi oo aan waxba galabsan”ayuu yiri Maxamed Dheere oo sheegay in howlaha maamulka Gobolka Banaadir ay ragaadiyeen dagaallada ay kooxaha ku kacsan Dowladda Federaalka ay Muqdisho ka wadaan.
Maxamed Dheere waxaa uu sheegay in Dowladda Federaalka ay mucaaradka ugu baaqdy dib u heshiisiin, sidaas oo kalena ay maamul ahaan ugu baaqayaan dib u heshiisiin, “Walaalaheena mucaaradka ah waxaan leenahay haddii aad wax tabaneysaan wada hadalka ogolaada, soo bandhiga waxyaabaha aad tabaneysaan”ayuuna yiri Maxamed Dheere oo sheegay in aan wax horumar ah lagu gaareynin dagaallo aan dhamaad lahayd, qaraxyo iyo dilal.
Hadalka Maxamed Dheere ee baaqa nabadeed ah ayaa wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo shalay uu ku eedeeyay Ururka Al-Shabaab in ay ka dambeeyaan Dagaallada iyo dilalka ka dhaca Magaalada Muqdisho, isagoo xusay in aysan dowladda federaalka dadka dilin balse ay xirto muddo kadibna ay sii deyso,halka uu sheegay in dhinaca ka soo horjeeda Dowladda ay dadka dilaan.
Ugu dambeyntiina, Maxamed Dheere waxaa uu shaqaalaha Maamulka Gobolka Banaadir guddoonsiiyay lacag dhan 91,200,000 Sh. So ah taasi oo uu ku tilmaamay mid abaal marin ah oo ay Shaqaalihiisa muteysteen kadib markii ay howl-karnimo muujiyeen waa sida uu hadalka u dhigaye.
War Deg Deg ah : Madaafiic Hoobiyeyaal oo goor dhoweyd lagu weeraray Xarunta Warshada Baastada, xilli Ciidamada Ethiopia ay yareeyeen Fariisimahooda Muqdisho.
Janaayo 30, 2008
Ugu yaraan 10 Madaafiicda loo yaqaan Hoobiyaha ayaa lala beegsaday Xarunta Warshadii Baastada, xilli Ciidamada Ethiopianka ay yareeyeen Fariisimahooda Muqdisho, oo qaarkood ay baneeyeen.
Madaafiicda oo aan ilaa iyo hada la ogeyn qasaaraha ay geysteen ayaa warar soo baxaya sheegayaan in Kooxaha ka soo horjeeda Dowladda ay si toos ah u bartilmaameedsadeen Fariisimahaas oo xalay qeyb ka mid ah Ciidamada Ethiopianka ah ka baxeen.
Dadka Muqdisho oo maanta ku wada faraxsanaa bixitaanka Ciidamada Ethiopia ayaa mar kale ka qaracmay Hugunka Madaafiicda dhaceysa, xilli ay rajeynayeen in ay yaraadaan Iska Hor imaadyada iyo Qaraxyada, mar hadii Ciidamada Ethiopianka ay ka baxayaan fariisimaha badan ee ay ku leeyihiin Caasimada.
Weerarka Hoobiyeyaashan ayaa ku soo aadaya, xilli Cutubyo ka tirsan Ciidamada Ethiopia ay xalay ka baxeen Fariisimaha kala ah Wasaaradii Gaashaandhiga, Xerada Maslaxa, Asluubta iyo qeybo kale, waxaana ka bixitaankaas lagu tilmaamay mid lagu yareynayo Ciidamadooda kaga sugan Caasimada.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Janaayo, 2008.